एक हप्तामै कालो अनुहार गोरो बनाउन अपनाउनुहोस्, यी निकै सरल घरेलु उपाय ! | सुदुरपश्चिम खबर
एक हप्तामै कालो अनुहार गोरो बनाउन अपनाउनुहोस्, यी निकै सरल घरेलु उपाय !
मानिस आफ्नो अनुहार सकेसम्म गोरो बनाउन प्रयासरत हुन्छन् । बजारमा पाइने विभिन्न प्रकारका गोरो बनाउने क्रिमहरुको प्रयोगले छालामा नराम्रो असर पर्नसक्छ ।
अनुहारमा चमक पाउनको लागि हामी महँगा क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं । तर हामी आफैँले थोरै दिमाग लगाउने हो भने घरेलु उपायहरु अपनाएर पनि अनुहार गोरो बनाउन सकिन्छ ।
अनुहार तथा छाला गोरो बनाउन निम्न १० घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
१) बेकिंग सोडाः बेकिंग सोडा र पानीलाई मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । त्यसपछि आफ्नो अनुहार फेस वाशले धुनुहोस् । अनि अनुहारमा तयार गरिएको पेस्टलाई लगाउनुहोस् । र १५ मिनेटपछि मुख धुनुहोस् ।
२) दूध र केराः पाकेको केरालाई दूधसँग मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । अनि अनुहारमा लगाई २० मिनेटपछि सफा पानीले मुख धुनुहोस् ।
३) गुलाब जलः गुलाब जललाई दूधसँग मिसाएर सधैं राति सुत्नुभन्दा अगाडि अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको छा’लामा चमक ल्याउँदछ ।
४) घ्युकुमारीको लेदोः यसलाई अनुहार र घाँटीमा ३० मिनेट लगाउनुहोस् । यसले तपाईंको छा’लालाई गोरो, सफा र नरम बनाउने छ ।
५) सूर्यमुखीको बीउः थोरै सूर्यमुखीको बीउलाई रातभर दूधमा भिजाएर राख्नुहोस् । त्यसपछि बिहान यसमा बेसार र केही केशरलाई हालेर पेस्ट बनाउनुहोस् । यसलाई आफ्नो अनुहारमा १५ मिनेटसम्म लगाउनुहोस्। केही दिनमै तपाईंको अनुहार गोरो हुनेछ ।
६) आँपको बोक्राः थोरै आँपको बोक्रालाई दूधमा पिसेर पेस्ट बनाउनुहोस् । त्यसपछि यसलाई १५ मिनेटसम्म लगाई अनुहार सफा पानीले पखाल्नुहोस् । यसको प्रयोगले छाला गोरो हुनेछ ।
७) महः महको केही थोपालाई कागती र थोरै दहीमा मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस् । १५ मिनेटपछि मुख धुनुहोस् । यसले अनुहार सफा भई गोरो हुनेछ ।
८) चिनीले घोटेर सफा गर्नेः चिनीलाई कागतीको रससँग मिसाएर हातको मद्दतले अनुहारमा दल्नुहोस् । यसले मरेको सेललाई हटाई अनुहारलाई सफा बनाउँछ ।
९) नरिवलको पानीः दिनको दुईपल्ट अनुहारमा नरिवलको पानी लगाउनुहोस् । यसले दागधब्बा हटाउन मद्दत गरी छा’लालाई गोरो बनाउँछ ।
१०) पानीको धेरै प्रयोगः पानीले शरीरबाट गन्धलाई बाहिर निकाली अनुहारको छालालाई तन्काई चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्दछ ।
तपाईंलाई दिनमा ८ घण्टाको निद्रा लिनु जरुरी छ। यसले आँखाको तलको भागको डार्क सर्कल हटाउँछ। साथै प्राकृतिक रुपमा चमक आउँछ र छाला गोरो देखिन्छ । यो पनि पढ्नुहोला !
दिनमा १ चोटी लगाउनुहोस् यो चिज, अनुहार हुनेछ सुन्दर र गोरोः तपाईंले आफ्नो छालालाई चमकदार बनाउनको लागी धेरै क्रीमको प्रयोग गर्नुभयो होला । तर अझै पनि तपाईंको अनुहारमा कुनै सुधार आएको छैन, भने आज हामी तपाईंलाई त्यस्तो घरेलु उपचारको बारेमा बताउन जाँदैछौं । जसले तपाईंको अ’नुहारलाई केहि दिनमा नै उज्यालो र च’मकदार बनाउनेछ । वास्तवमा सेतो पार्ने क्री’मले तपाईंको अनुहार बिगार्दछ ।
सामग्रीः १) अण्डा( १, २) एलोवेरा जेल – १ चम्चा, ३) कागतीको रस – १ चम्चा, ४) बेसन (१ टेबलस्पुन( पहिले एउटा कचौरामा का’गतीको रस लिनुहोस् र त्यसपछि यस भित्र एलोवेरा जेल मिलाउनुहोस् । यदि तपाईंले एलोवेरा जेल प्रा’कृतिक पाउनुभयो भने यो अझ उत्तम छ । तर यदि तपाईं यो प्राप्त गर्नुहुन्न भने, तपाईं कुनै पनि ब्रान्डको एलोवेरा जेल लिन सक्नुहुन्छ । अब यसमा एक चम्चा अ’ण्डाको सेतो भाग लिनुहोस् र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् । अन्तमा यसमा चनाको पीठो थप्नुहोस् । एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्, तपाईंले यी सबै चीजहरूलाई अनुक्रममा मिलाउनु पर्छ । अब राम्रो पेस्ट बनाउनुहोस् र तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस् ।
प्रयोगको विधिः तपाईं यो उपाय सिधा तपाईंको अनुहारमा लागू गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईं नुहाउन जानुहुन्छ, तब यसलाई लगाउनुहोस् र केही समयको लागि यो मालिश गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई केहि समय छोड्नुहोस् र पानीले धुनुहोस् । अण्डा भित्र यस्ता तत्वहरू फेला पर्दछन्, जसले अनुहार गो’रो र चमकदार बनाउँछ । यस बाहेक, एलोवेरा जेलले तपाईंको छा’लाको राम्रो ख्याल राख्दछ र चनाको पिठोले अथवा बेसनले तपाईंको अनुहारको रंग पनि बढाउँछ । तपाई यसको प्रयोग हप्तामा दुई वा तीन चोटी गर्न सक्नुहुनेछ । यसको प्रयोगले तपाईले हप्तामा नै फरक पाउनुहुनेछ । तपाईको अनुहार पहिलाको भन्दा पनि राम्रो हुनेछ ।